Isihloko igxila "Panasonic" Isinkwa kusukela umkhiqizi. Sekuyisikhathi eside Inkampani kube umholi kulo mkhakha. In the line kukhona onobuhle eziningi ezahlukene, okuyinto Kunconywa ukubheka abathengi ezingaba khona. Ngokwesibonelo, i-Panasonic SD ZB2512. Idivayisi ngeke nazo zonke okulindelwe kuthokozise yilowo nalowo wesifazane.
Ukuze usebenze ezidingekayo amandla umshini isinkwa 550 Watts. Isinkwa ngeke nesisindo ekupheleni 600, 800 g noma 1 kg. It kuncike mode futhi ifomu. Kusukela ongakhetha kukhona timer, phumula, ithuba lokukhetha ubukhulu nombala isinkwa uqweqwe. Nokho, eminyakeni emibili izinketho ayifanele zonke izinhlelo.
Ukuphathwa Kwenziwa sibonga touch of a inkinobho. Kuvele isibonisi LCD. I timer ikuvumela uyephuza of akukho amahora angaphezu kuka-13. Lapho kususwa ukuxhumana ithuluzi izilungiselelo zigcinwa kumemori.
Inani Isisindo Panasonic SD ZB2512 - 7.5 kg. Umkhiqizi inikeza unyaka 1 iwaranti. Isilinganiso izindleko - ruble ayizigidi 10 ..
Izinhlelo etholakalayo Kumele kuqashelwe ikhono ukubhaka tinhlobo letehlukene isinkwa, kokuxova inhlama izinhlobo eziningana, kanye ukulungiswa sezimoto kanye izithelo isiraphu.
Model SD ZB2512 - okungcono isinkwa umenzi, ngokuvumelana abathengi. It lithuthukile izici ongakhetha eziningana ezintsha.
Kuvele ehilelekile ezithakazelisayo zale divayisi itholakala lokuthi ukuthi ithole emibili dispenser. Eyokuqala kuyadingeka ukuze insimbi bafaka izithako engeziwe (omisiwe amantongomane, utamatisi). Idivayisi yenza kube kuya ekupheleni inhlama, okuvumela ukumosha umbala umkhiqizo osuphelile. I dispenser yesibili ukwengeza nemvubelo. Ngezinye izikhathi ngisho abapheki elitheni nezobuchwepheshe singayisebenzisa kanjani ngokuphumelelayo le isithako uwoyela noma usawoti, bese lokho kuvimbela inhlama avuke. Yingakho usebenzisa dispenser. Isinkwa Panasonic SD ZB2512 engeza mass imvubelo vymeshennuyu letitabavumela ukwenza umsebenzi wabo kahle.
Okufakiwe iyunithi wathola enamathela non stick. Uqinisekisa imikhiqizo emihle kakhulu ukupheka. Ngaphezu kwalokho, le "ibhakede" linamandla ngokuphelele imihuzuko kanye umonakalo. Ngaphakathi, kukhona onqenqemeni amabili akhethekile. Ziyakwazi ezidingekayo ukuze nomkhombe kangcono. Ngakho-ke, umnikazi ngeke njalo ukubheka zedivayisi ukuze uhlole isimo inqubo. Ngenxa izindonga awugqinsi yokufudumala kwembulunga yonke iyunithi uzobe kukhiqizwa njalo ngezikhathi ezithile. Ifomu eqinile, ngakho ingangqubuzani uma yehlile.
Isinkwa Panasonic SD ZB2512 has brand new izici ezimbili ukuthi ziyojabula yimuphi umnikazi. Sikhuluma izinketho ukupheka isinkwa imiqulu, kanye malodrozhzhevogo test. Lapho ukusebenza uhlelo imvubelo yesibili kuyadingeka ngempela lemali ezincane kakhulu kuyehla cishe ingxenye yako. Kulokhu, umkhiqizo kuvela ezihlwabusayo kakhulu. Umsebenzi yakhelwe isikhathi eside, phakathi kwesikhathi lapho inhlama likhuphuka. Yilokhu ikuvumela ukuba kuzuzwe imiphumela impumelelo. Uhlelo ingasebenza kusukela ehoreni kuya 4 amahora. Imizuzu 50.
"Isinkwa imiqulu" izenzo ngendlela onikeza isikhathi umsebenzisi walala zonke izithako ngesikhathi ezithile okuzokwenziwa etholakala ngaphakathi umkhiqizo osuphelile. Abathengi ngokuvamile kuqhathaniswa umkhiqizo sinkhwa. Le nkampani "Panasonic" akazange bayakhohlwa izinhlelo ukudala rye isinkwa and khekhe.
Izinzuzo Panasonic kudivayisi SD ZB2512 kungenziwa ngokuthi iqoqo izinhlelo, ukutholakala dispenser, inani elikhulu imisebenzi ngokudala test.
I lokususa wukuthi uma ukupheka ezithile imikhiqizo Awukwazi ukukhetha ubukhulu nombala koqweqwe.
Izibuyekezo zedivayisi akukuhle neze. Abantu abaningi babhale ukuthi intengo kwakufaneleka ngokugcwele. Iliphi iphuzu abathengi ezinhle? imikhiqizo okumnandi wayixova kahle inhlama, steel icala, kudinga yesondlo sakugcina, eziningi izinhlelo.
Kulaba minuses abathengi uphawule umsebenzi inomsindo kakhulu of dispensers, futhi aphuke kalula kakhulu ifaka plastic.
Izikhulumi Wireless JBL GO: Izibuyekezo ikhasimende
"I kwisiqandisi smart" ngobuchwepheshe Smart LG. Tupperware esitsheni "efrijini smart '
Coffee umshini "Dolce Gusto": nokubuyekeza amakhasimende. Kufanele I ukuthenga umshini ekhaya-espresso "Nescafe Dolce Gusto"?
Amarobhothi Humanoid: isithombe Nobuchwepheshe
EVietnam ngo-September: izinkambo, zokungcebeleka, isimo sezulu, kanye nokubuyekeza mayelana ukuphumula
Kwakuphambana Okungalawulwa: kwesokudla indlela. Icacisa uhlobo empambana
Ukuzinza lwezezimali lenkampani yakho njengento ethatha ezokuphepha isilinganiso.
"Triazavirin": yokusetshenziswa futhi impendulo